Nifanenjehana ireo mpampanoa lalàna Frantsay, nanadihady ny fanafihana mitam-piadiana sy ny fandrobana an'i Kim Kardashian, izay nitranga tany am-piandohan'ny alatsinainy tao amin'ny efitranon'ny hotely Paris George George. Ny polisy dia miahiahy ny fandraisana anjara amin'ny heloka bevava ataon'ny jiolahimboto malaza, ary koa mino fa nisy olona nanampy azy .
Ireo manam-pahaizana manokana amin'ny halatra firavaka
Mino ny manam-pahaizana fa ny heloka bevava dia mety ataon'ny mpikambana ao amin'ny tarika Pink Panther, izay manasokajy ny fangalarana ny firavaka. Hatramin'ny 80 taona, nangalatra firavaka mendrika mihoatra ny 500 tapitrisa euros izy ireo. Ao Interpol, heverina ho "asan'ny zavakanto" ny heloka vitany. Miezaka manatratra ny azy manokana izy ireo raha tsy misy herisetra tafahoatra, matetika ny heloka bevava ataon'izy ireo dia miaraka amin'ny fitazonana manjavozavo sy ny antikristy.
Olona avy amin'ny faribony akaiky
Ny mpiambina ny lamina dia azo antoka fa ireo jiolahy virtuosika dia tsy afaka nampiato ity orinasa ity raha tsy nisy ny fandraisana anjara olona na olona avy amin'ny manodidina an'i Kim Kardashian. Fantatr'ireo mpanao heloka bevava ny vanim-potoana nipetrahan'ilay kintana raha tsy teo ny mpiaro azy. Tamin'io alina io dia notaterina i Pascal Duvier mavesatra mba hiaro ireo rahavavin'i Kim ao amin'ny Club L'Arc.
Ilay halatra dia naka azy teo ho eo enina minitra. Ireo jiolahy dia tsy nanontany mihitsy ilay niharam-boina izay misy ny boaty firavaka, fa nofatorana fotsiny izany ary nosakanany tao amin'ny efitra fandroana, satria fantatr'izy ireo tsara hoe aiza no nafenina ny zavatra nilain'izy ireo.
Etsy ankilany, ny zandary dia efa nanadihady ny lehiben'ny sampandraharaham-piarovan'i Mr West West Duvier ary ny fitondrantenany sy ny valiny dia tsy nahatonga azy ireo ho nenina ratsy.
I Gwyneth Paltrow dia nivoaka taorian'ny fampakaram-bady ary nanisy peratra fifandraisana
Halle Berry sy Olivier Martinez, rehefa avy nandray ny ankizy, dia nanao fialantsasatra
Justin Timberlake sy Jessica Biel - fiainana feno fitiavana sy fitiavana
Ho lasa reny indray i Kerry Washington
Nosoratan'i Megan Markle ny akanjon'ny vehivavy
Ny fiainan'i Ornella Muti
Harvey Weinstein nanao an'i Jessica Chestane manao akanjo Marchesa
Ny mpilalao sarimihetsika Maggie Grace dia hanambady mpandraharaha Brent Bushnell
Jennifer Lopez sy Casper Smart
Ben Affleck dia tsy te hanavotra an'i Jennifer Garner noho ny vola
Nirotsaka i Megan Markle sy Prince Prince: Fankasitrahana voalohany avy amin'ny havana sy ny mpankafy
Ny fahafatesan'ny mpampakatra dia tena loza goavana ho an'i Michel Dockery
Ny herisetra amin'ny matoanteny verbal
Ploughs in a juice
Isaorana ilay volo vaovao Gigi Hadid nivadika ho Brigitte Bardot
Sakafo Soy - sakafo mahandro
Nahoana ny zaza no mitoloko sy mitomany mandritra ny sakafo?
Inona no azonao ihinanana miaraka amin'ny fery?
Ny hematogen - tombony sy fahasimbana
Hepatita viriosy - soritr'aretina
Ny tombony amin'ny ovy
Karipetra kely ao amin'ny efitrano ho an'ny zazavavy